အသိပေးသဘောတူညီခကျြဟာအခြေခံအယူအဆ-အချို့တစ်အနီးရှိစွဲလို့ပြောလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ် (Emanuel, Wendler, and Grady 2000; Manson and O'Neill 2007) သုတေသနကျင့်ဝတ်နှစ်ဆပိုများလာ။ သုတေသနကျင့်ဝတ်၏အရိုးရှင်းဆုံးဗားရှင်း says: "။ အရာအားလုံးများအတွက်အသိပေးသဘောတူညီခကျြ" ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့စည်းမျဉ်း, သို့သော်, လက်ရှိကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအခြေခံမူများ, ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်း, ဒါမှမဟုတ်သုတေသနအလေ့အကျင့်များနှင့်ကိုက်ညီသည်မဟုတ်။ အဲဒီအစား, သုတေသီများ, လို့ရပါတယ်သင့်နှင့်တစ်ဦးပိုမိုရှုပ်ထွေးအုပ်ချုပ်မှုကိုအတိုင်းလိုက်နာကြပါ။ "အများဆုံးသုတေသနများအတွက်သဘောတူညီခကျြအခြို့ကိုပုံစံတစ်မျိုး"
ပထမဦးစွာအသိပေးသဘောတူညီခကျြနဲ့ပတျသကျတဲ့အလွန်အမင်းရိုးရှင်းတဲ့အိုင်ဒီယာကျော်လွန်ရွှေ့နိုင်ရန်အတွက်ငါခွဲခြားဆက်ဆံမှုလေ့လာဖို့လယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်အကြောင်းကိုပိုမိုသင်ပြောပြချင်။ ဒီလေ့လာမှုတွေမှာတော့တချို့ယောက်ျားနှင့်အချို့သောကွဲပြားခြားနားသောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့မိန်းမတို့ကို-လျှောက်ထားကွဲပြားခြားနားသော-လို့ပြောဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်သောသူ, အတုလျှောက်ထား။ လျှောက်ထားသူတွေထဲကအမျိုးအစားကပိုမကြာခဏငှားရမ်းထားရရှိလိုလျှင်, သုတေသီများငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းရှိစေခြင်းငှါကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ ဤအခနျး၏ရည်ရွယ်ချက်ဤစမ်းသပ်ချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးအပါဆုံးအရာကဤစမ်းသပ်ချက်-The အတွက်သင်တန်းသားများကိုသဘောတူညီခကျြပေးအလုပ်ရှင်များ-ဘယ်တော့မှသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ တကယ်တော့အဲဒီသင်တန်းသားများကိုတက်ကြွစွာလှည့်ဖြားနေကြသည်။ သို့သျောလညျး, ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုလေ့လာဖို့လယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက် 17 နိုင်ငံများတွင်အနည်းဆုံး 117 လေ့လာမှုများအတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြ (Riach and Rich 2002; Rich 2014) ။
ခွဲခြားဆက်ဆံမှုလေ့လာဖို့လယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်ကိုအသုံးပြုဖို့သူအသုတေသီများစုပေါင်း, သူတို့ကို Ethics ခွင့်လုပ်ကြောင်း, ဤလေ့လာမှုလေး features တွေဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ: အအလုပ်ရှင်များမှ (1) ကန့်သတ်အန္တရာယ်; (2) ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောအတိုင်းအတာရှိခြင်း၏ကြီးမြတ်လူမှုရေးအကျိုးခံစားခွင့်, (3) ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းတိုင်းတာခြင်း၏အခြားနည်းလမ်းများများ၏အားနည်းချက်, နှင့် (4) လှည့်စားပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြောင့် setting ကို၏စံချိန်စံညွှန်းကိုခြိုးဖောကျပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကို (Riach and Rich 2004) ။ ဤအခြေအနေများတစ်ခုချင်းစီအရေးပါဖြစ်ပြီး, သူတို့ကိုမဆိုကျေနပ်နေကြသည်မဟုတ်လျှင်, ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကိစ္စပိုပြီးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ ကန့်သတ်အန္တရာယ် (Persons နှင့်ကောင်းတဲ့အများအတွက်လေးစား) နှင့်အလွန်အကျိုးရှိနှင့်အခြားနည်းလမ်းများ (ကောင်းတဲ့အတရားမျှတရေး) ၏အားနည်းချက်: ဤအင်္ဂါရပ်သုံးခုအတွက် Belmont အစီရင်ခံစာအတွက်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအခြေခံမူကနေဆင်းသက်လာနိုင်ပါသည်။ နောက်ဆုံးအင်္ဂါရပ်, Contextual စံချိန်စံညွှန်းများအကြမ်းမဖက်, ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားများအတွက် Menlo အစီရင်ခံစာရဲ့အလေးစားမှဆင်းသက်လာနိုင်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်အလုပ်အကိုင်အပလီကေးရှင်းဖြစ်နိုင်သောပရိယာယ်အချို့မျှော်လင့်ပြီးသားလည်းမရှိတဲ့ setting ကိုဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ဤစမ်းသပ်ချက်တစ်ခုပြီးသားယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာရှုခင်းညစ်ညူးစေကြပါဘူး။
ဒီအခြေခံမူ-based အငြင်းအခုံအပြင်, IRBs များစွာလည်းထိုအလေ့လာမှုများအတွက်သဘောတူညီခကျြ၏မရှိခြင်းအထူးသဖြင့်အသုံးများသောနည်းဥပဒေ§46.116, အပိုင်း (ဃ) ထဲမှာရှိပြီးသားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အမေရိကန်တရားရုံးများမှာလည်းခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုတိုင်းတာရန်လယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်များတွင်လှည့်စား၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့်အသုံးပြုခြင်း၏မရှိခြင်းထောက်ခံခဲ့ကြ (အမှတ် 81-3029 ။ အယူခံအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတရားရုံးကသတ္တမတိုက်နယ်) ။ ထို့ကြောင့်သဘောတူညီချက်မပါဘဲလယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်များအသုံးပြုခြင်းရှိပြီးသားကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအခြေခံမူများနှင့်တည်ဆဲစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ (United States မှာအနည်းဆုံးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို) နဲ့ကိုက်ညီပါတယ်။ ဒါကကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ခြင်း IRBs များစွာနှင့်အယူခံအမေရိကန်တရားရုံးအသုံးပြုပုံကျယ်ပြန့်လူမှုသုတေသနအသိုင်းအဝိုင်းကထောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းငြင်းပယ်ရမယ် "အရာခပ်သိမ်းအဘို့အသိပေးသဘောတူညီခကျြ။ " ဒီသုတေသီများကိုလိုက်နာတဲ့စည်းမျဉ်းမကသူတို့နောက်ကိုလိုက်သင့်ကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
"အရာခပ်သိမ်းအဘို့အသိပေးသဘောတူညီခကျြ" ကျော်လွန်ရွေ့လျားခက်ခဲတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကိုအတူသုတေသီများအရွက်: သဘောတူညီခကျြအဘယျပုံစံများသုတေသနအဘယ်အရာကိုမျိုးကိုလိုအပ်လဲ? ဒါကြောင့်အများစုက Analog စအသက်အရွယ်အတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနများ၏အခြေအနေတွင်ဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်သဘာဝကျကျ, ဤမေးခွန်းကိုန်းကျင်သိသိသာသာဆွေးနွေးငြင်းခုံရှိခဲ့သည်။ ကြောင်းအငြင်းအခုန်စုစည်းတင်ပြရန်, NIR Eyal (2012) ကရေးသားခဲ့သည်:
ဒီစကားစစ်ထိုးပွဲကနေအရေးပါတဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်အသိပေးသဘောတူညီခကျြအားလုံးသို့မဟုတ်ဘာမျှမဟုတ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်: သဘောတူညီခကျြ၏ခွန်အားကြီးနှင့်ဆီးအတားမရှိပုံစံများရှိပါတယ်။ တချို့အခြေအနေတွေမှာတော့ခိုင်မာတဲ့အသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သောပုံရသည်, ဒါပေမယ့်အခြားသူတွေအတွက်သဘောတူညီခကျြ၏အားနည်းပုံစံများကိုသင့်လျော်သောဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့နောက်ငါသုတေသီများအသိပေးသဘောတူညီချက်ရရှိရန်ရုန်းကန်စေခြင်းငှါ, အဘယ်ကြောင့်သုံးအကြောင်းရင်းများကိုဖော်ပြရန်လိမ့်မယ်, ငါရှိသူများကိစ္စများတွင်အနည်းငယ်ရွေးချယ်စရာဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်။
ပထမဦးစွာတစ်ခါတစ်ရံအသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်ပေးသင်တန်းသားများကိုတောင်းဆိုနေတာသူတို့ရင်ဆိုင်ရသောအန္တရာယ်များကိုတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Encore အတွက်, သူတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာကအင်တာနက်ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုများတိုင်းတာခြင်းအတွက်အသုံးပြုရှိသည်ဖို့သဘောတူညီခကျြပေးဖိနှိပ်အစိုးရများအောက်တွင်နေထိုင်နေသောလူတောင်းဆိုနေတာတိုးမြှင့်အန္တရာယ်မှာသဘောတူသောသူတို့အားနေရာချပါလိမ့်မယ်။ သဘောတူညီခကျြတိုးမြှင့်အန္တရာယ်မှဦးဆောင်သည့်အခါ, သုတေသီများသူတို့ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အများပြည်သူဖြစ်ပြီးသင်တန်းသားများကိုဖယ်ထုတ်ရန်အဘို့အဖြစ်နိုင်ကြောင်းကိုသေချာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သူတို့ကသင်တန်းသားများကို (ဥပမာ, NGO များ) ကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းအုပ်စုများထံမှခွင့်ပြုချက်ကိုရှာကွနိုင်ဘူး။
ဒုတိယအချက်မှာလေ့လာမှုစတင်မတိုင်မီတစ်ခါတစ်ရံတွင်အပြည့်အဝအသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်ရှိခြင်းလေ့လာမှု၏သိပ္ပံနည်းကျတန်ဖိုးကိုလျှော့ပေးလိုက်လျောနိုင်ဘူး။ သင်တန်းသားများကိုသုတေသီများစိတ်ခံစားမှုနှင့် ပတ်သက်. စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုပ်နေတာခဲ့သိရလျှင်ဥပမာအားဖြင့်စိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်အတွက်, ဤသူတို့၏အမူအကျင့်ပြောင်းလဲပြီပေလိမ့်မည်။ သင်တန်းသားများကိုမှသတင်းအချက်အလက်ခွငျး, ပင်သူတို့ကိုလှည့်ဖြား, အထူးသဖြင့်စိတ်ပညာအတွက်ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်အတွက်, လူမှုရေးသုတေသနအတွက်အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ လေ့လာမှုတစ်ခုကစတင်ခဲ့သည်မတိုင်မီအကြောင်းကြားခွင့်ပြုချက်မဖြစ်နိုင်ချေရှိလျှင်, သုတေသီများတတျနိုငျသ (နှင့်များသောအားဖြင့်လုပ်ပေး) ကိုလေ့လာမှုပြီးဆုံးပြီးနောက်သင်တန်းသားများကို debrief ။ Debriefing ယေဘုယျအားဖြင့်, အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်ရှင်းပြမဆိုပျက်ဆီး remediating, နှင့်တကယ်တော့ပြီးနောက်သဘောတူညီခကျြရယူပါဝင်သည်။ အဆိုပါ debriefing သူ့ဟာသူသင်တန်းသားများကိုထိခိုက်စေလိမ့်မယ်ဆိုပါကလယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်အတွက် debriefing, သင့်လျော်သည်ရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. သို့သော်အချို့ဆွေးနွေးငြင်းခုံ, ရှိပါတယ် (Finn and Jakobsson 2007) ။
တတိယအချက်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကသင့်ရဲ့လေ့လာမှုအားဖြင့်ထိခိုက်လူတိုင်းကနေအသိပေးသဘောတူညီချက်ရရှိရန်ပို့ဆောင်ထောက်ပံ့ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များလက်တွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, (Bitcoin တစ် crypto-ငွေကြေးနှင့် blockchain အားလုံး Bitcoin ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာတစ်အများပြည်သူစံချိန်သည် Bitcoin blockchain လေ့လာရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်းသူတစ်ဦးသုတေသီစိတ်ကူး (Narayanan et al. 2016) ) ။ ဤလူအတော်များများအမည်မသိကြောင့်ကံမကောင်းစွာပြုလုပ် Bitcoin တတ်သောသူအပေါင်းတို့ကထံမှသဘောတူခွင့်ပြုချက်ရရှိရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သုတေသီ Bitcoin အသုံးပြုသူတစ်ဦးနမူနာဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်နှင့်၎င်းတို့၏အသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်တောင်းရန်ကြိုးစားနိုင်ဘူး။
ဤသုံးပါးသုတေသီများအသိပေးသဘောတူညီခကျြ-တိုးမြှင့်စွန့်စားမှုရယူနိုင်တော့မည်မပြုစေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်အကြောင်းရင်းများ, သုတေသနရည်မှန်းချက်များအလျှော့နှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးသုတေသီများအသိပေးသဘောတူညီချက်ရရှိရန်ရုန်းကန်ဘာဖြစ်လို့တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်မပေးန့်အသတ်-ဖြစ်ကြသည်။ ထိုအခါငါအကြံပြု-အသိပေးပြီးပြီသောသုတေသနအကြောင်းကိုအများပြည်သူ, တတိယပါတီများထံမှသဘောတူခွင့်ပြုချက်, debriefing အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ကိစ္စများတွင်ဖြစ်နိုင်သမျှမဖြစ်-စခွေငျးငှါပါဝင်သူတစ်နမူနာကနေသဘောတူခွင့်ပြုချက်ရှာကြံရှာကြံတစ်ခုဘေးဖယ်ထုတ်အားဖွင့်သည့်ဖြေရှင်းနည်းများ။ ထို့ပြင်ဤအအခြားနည်းလမ်းတတ်နိုင်လျှင်ပင်သူတို့ပေးထားသောလေ့လာမှုများအတွက်လုံလောက်သောမည်မဟုတ်ပါ။ ဤဥပမာပြအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုသို့သော်အသိပေးသဘောတူညီခကျြအားလုံးသို့မဟုတ်ဘာမျှမရှိ, ဖန်တီးမှုဖြေရှင်းချက်အားလုံးထိခိုက်ပါတီများအနေဖြင့်အပြည့်အဝအသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်မခံမယူနိုင်သောလေ့လာမှုများ၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာချိန်ခွင်လျှာတိုးတက်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကောက်ချက်ချထက်ရန် "အရာခပ်သိမ်းအဘို့အသိပေးသဘောတူညီခကျြ," သုတေသီများ, လို့ရပါတယ်သင့်နှင့်တစ်ဦးပိုမိုရှုပ်ထွေးအုပ်ချုပ်မှုကိုအတိုင်းလိုက်နာပြု "။ အရှိဆုံးအရာများအတွက်သဘောတူညီခကျြအခြို့ကိုပုံစံ" အခြေခံမူ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်, အသိပေးသဘောတူညီခကျြဟာအဘို့လိုအပ်သောမဟုတ်သလိုလုံလောက်သောမဖြစ်ပါသည် လူပုဂ္ဂိုလ်များကိုလေးစား၏အခြေခံမူ (Humphreys 2015, 102) ။ ထို့ပြင် Persons ကိုလေးစားရုံတစျခုသုတေသနကျင့်ဝတ်ဖို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာမျှမျှတတဖြစ်ဖို့လိုအပျသောအခြေခံမူရှိ၏ အလိုအလျောက်ကောင်းတဲ့, တရားမျှတမှုနှင့်ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွား, အတိတ်နှစ်ပေါင်း 40 ကျော် ethicists အားဖြင့်အကြိမ်ကြိမ်လုပ်မယ့်အချက်အဘို့အလေးစားလွှမ်းမိုးမပြုသင့် (Gillon 2015, 112–13) ။ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမူဘောင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်, အရာအားလုံးများအတွက်အသိပေးသဘောတူညီခကျြ (အပိုင်း 6.5 ကိုကြည့်ပါ) ထိုကဲ့သို့သောအချိန်ဗုံးအဖြစ်အခြေအနေများသားကောင်ကျရောက်သည့်အလွန်အမင်း deontological အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။